ကလေးက ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ဖျားတာ စိုးရိမ်စရာလား။ - Hello Sayarwon
အချို့ မိဘတွေက ဘေဘီလေးကို နာကျင်မှာစိုးတဲ့ စိတ်၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးမှ ကလေးဖျားသွားဦးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကာကွယ်ဆေး မထိုးပေးတာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ငယ်ရွယ်နုနယ်လှတဲ့ ဘေဘီ​လေးတွေကို ကြောက်စရာ ရောဂါတွေရန်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာက ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းပါ။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဘေဘီလေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အခါ ဖျားတာ ဘာကြောင့်လဲ။ စိုးရိမ်ရမယ့် အကြောင်းအရင်း ဟုတ်လား၊ မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကို ဆွေးနွေးပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အခါ မိဘတွေ တွေးကြောက်တဲ့အရာ
ကာကွယ်ဆေးထိုးတာက မိဘတိုင်းအတွက် ခက်ခဲတဲ့ အချိန်တစ်ခုပါ။ ကလေးက ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ငိုတဲ့အခါ ကူကယ်ရာမဲ့သလိုကို ခံစားရပါတယ်။
တကယ်ကတော့ ကာကွယ်ဆေးက ဘေဘီလေးကို ထိခိုက်စေတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘေဘီလေးကို အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ ရောဂါဆိုးတွေ အန္တရာယ်ကနေ ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေးတဲ့အရာပါ။
ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အခါ ကလေးက ဖျားမှာလားဆိုတာက မိဘတိုင်း တွေးကြောက်ကြတဲ့အရာပါ။
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးချိန်မှာ ဖျားတာက ပုံမှန်ပဲလား။
အချို့ ဘေဘီလေးတွေက ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးချိန်မှာ ကိုယ်တွေပူလာပြီး ဖျားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါက စိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ မေမေတို့ရေ။
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ဘေဘီလေး ကိုယ်ပူလာတယ်ဆိုတာက ဘေဘီလေးရဲ့ ကိုယ်ခံအားက ကာကွယ်ဆေးကို သိရှိတုံ့ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ပြီးရင် အဖျားက သက်သာသွားမှာပါ။ စိုးရိမ်ရမယ့် ကျန်းမာရေး ပြဿနာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင် ဘေဘီလေးက ဘာလို့ဖျားတာလဲ။
ကာကွယ်ဆေးဆိုတဲ့ သဘောက ခန္ဓာကိုယ်ကို ရောဂါတွေကူးစက်ခံရမှုကနေ ကာကွယ်ပေးတာပါ။ ရောဂါပိုးတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ ကိုယ်ခံအားကို အစောကတည်းက လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ သဘောပါ။
ကာကွယ်ဆေးဆိုတာက သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် အားပျော့သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ် အနည်းငယ်ကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ်ထားတဲ့ ပရိုတင်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ထိရောက်ဘေးကင်းအောင် ထုတ်ထားတဲ့ ဆေးဝါးပါ။ ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ အန္တရာယ်အတွက် လုံလောက်တဲ့ ကာကွယ်မှုကို ပြင်ဆင်ထားတဲ့သဘောပေါ့။
ကာကွယ်ဆေးက ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါ ကိုယ်ခံအားဆဲလ်တွေကို ရောဂါပိုးတွေကို တုံ့ပြန်ခုခံတတ်စေဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးတာကြောင့် ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာက ရောင်တာ၊ နာတာ၊ ဖျားတာမျိုးတွေ ခံစားရတဲ့ သဘောပါ။ တကယ်တော့ ဆေးထိုးပြီးလို့ ဖျားတယ်ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ် ကိုယ်ခံအားက ကာကွယ်ဆေးကို အကောင်းဆုံး တုံ့ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ အမှတ်အသားပါ။
ကဲ..ဒါဆို ဘေဘီလေးက ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ဖျားတာက စိုးရိမ်စရာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မေမေတို့ သိလောက်ရောပေါ့နော်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးချိန်မှာ သက်သောင့်သက်သာရှိစေဖို့ ဒါလေးတွေ ဂရုစိုက်ပေးပါ။
ဘေဘီလေးက ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖျားတာကို သက်သာစေဖို့ဆိုရင်တော့ မေမေတို့အနေနဲ့
ကလေးကို သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်ပေးပါ။ ချည်သား ပွပွချောင်ချောင်လေးတွေဆို အဆင်အပြေပါတယ်။
မိခင်နို့၊ အရည် များများတိုက်ပါ။
အဖျားသက်သာစေဖို့ ကလေးကိုယ်အလေးချိန်အလိုက် ပါရာစီတမောတိုက်ပေးလို့ရပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးတာက ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်နည်းဖြစ်တာကြောင့် နုနယ်လှတဲ့ ဘေဘီလေးကို ရောဂါတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ ဖျားမှာကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ ကာကွယ်ဆေး မထိုးပေးတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ မေမေ။
How immunization works? https://www.sanofi.com/en/your-health/vaccines/how-immunization-works Accessed Date 26 October 2020
CDC. Understanding How Vaccines Work https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/vacsafe-understand-color-office.pdf Accessed Date 26 October 2020
You, your loved ones and vaccination https://www.sanofi.com/en/your-health/vaccines/value-of-vaccines Accessed Date 26 October 2020
CDC. Centers for Disease Control and Prevention. Understanding How Vaccines Work. [Online] 2018 [Cited: April 2019] https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/vacsafe-understand-color-office.pdf Accessed Date 26 October 2020
NHS vaccination schedule https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/nhs-vaccinations-and-when-to-have-them/ Accessed Date 26 October 2020
Immunization Schedule https://kidshealth.org/en/parents/immunization-chart.html Accessed Date 26 October 2020
Fever after vaccination in Babies https://parenting.firstcry.com/articles/fever-after-vaccination-in-babies/ Accessed Date 26 October 2020